'भ्रष्टाचार छ भने अमेरिकी लगानी आउँदैन’
काठमाडौँ — नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाको दौत्य सम्बन्ध ७३ औं वर्षमा छ । नेपाललाई आफ्नो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको केन्द्रीय साझेदार घोषणा गरेको अमेरिकाको यहाँ खास चासो के हो ?
अमेरिकी राजदूतका रुपमा छ महिनाअघि काठमाडौं आएका र्‍यान्डी बेरीसँग कान्तिपुर र काठमान्डु पोस्टले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
म हाम्रो साझेदारी निर्माणका आधार हेर्न र यसले दिने परिणामतर्फ बढी उत्सुक छु । हामीले यहाँ सुरुबाटै जनस्तरको सम्बन्ध गाँस्दै आएका छौँ । मैले यहाँ आएका अमेरिकी कम्पनी, संस्था र व्यक्तिको निजी साझेदारी सम्बन्ध अध्ययन गरिरहेको छु, जो नेपालको आतिथ्यता र सांस्कृतिक सजीवताबाट प्रभावित भएर केही गर्न उद्यत छन् ।
खासमा यो जापानी नीतिमार्फत विकसित एक नीतिगत विचार हो । यहाँ खुला र स्वतन्त्र देश, क्षेत्र र विश्वको कुरा गर्दा यसको ठूलो महत्त्व छ भनेर हामीले त्यस नीतिलाई अंगिकार गर्‍यौं । किनभने हामी सबै यसबाट लाभान्वित हुन्छौं भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
एक वर्षअघि हाम्रा पूर्वरक्षामन्त्री जेम्स माटिसले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे एक परिभाषामूलक वक्तव्य दिनुभएको थियो । कतै यो चीनलाई अलग पार्ने योजना हो कि भनेर उहाँलाई सोधिएको थियो । उहाँले प्रस्ट गर्नुभएको थियो कि अमेरिकाले कहिल्यै कुनै मित्र वा साझेदारलाई आफूवा अन्य देशमध्ये एकलाई रोज्नु भनेर कहिल्यै भन्ने छैन । हामी त्यसो गर्दै गर्दैनौं । यो (रणनीति) त्यस्तो हुँदा पनि होइन । यो एक अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताबारे विमर्श हो ।
चीनको 'बीआरआई’ अभियानमा नेपालको सहभागितालाई अमेरिकाले कसरी हेरेको छ ?
हामी यहाँ चीन विशेषलाई लक्ष्य गरी नीति बनाइरहेका छैनौँ । हाम्रो नीति नेपालमा आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्ने हामीलगायत जुनै देशसँग पनि सम्बन्धित छ । प्रश्न के हो भने, तपाईं जब कुनै परियोजनामा चासो दिनुहुन्छ, सोच्नुपर्ने हुन्छ के त्यसले राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई जोगाइराख्छ ? पारदर्शितालाई कायम राख्छ ? आर्थिक दिगोपनलाई सुनिश्चित गर्छ ? स्थानीयहरूलाई संलग्न गराउँछ ? अनि, यो भूराजनीतिक रूपले संवेदनशील छ ? यसले वातावरणलाई जोगाउँछ ? अनि अन्त्यमा के यसले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्छ ?
अमेरिकाले यहाँ प्रत्येक दिन के ल्याइरहेको छ भनेर कुरा गर्नमा म बढी इच्छुक छु, सैद्धान्तिक होडका बारेमा होइन । म हाम्रा उत्तम प्रयासका बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु । अमेरिकीले गर्ने पनि यही हो । बेलाबेला चल्ने षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरूप्रति म सचेत छु । मैले दक्षिण एसियामा काम गर्दै आएको ३० वर्ष भएको छ ।
षड्यन्त्रका बारेमा प्रत्येक पटक पढ्दा मैले उठाउने पहिलो प्रश्न हो, के यसले कुनै अर्थ राख्छ ? यसमा तपाईंले अरूलाई जस्तै मलाई पनि शंका गर्नुपर्छ किनभने यसले कुनै अर्थ राख्दैन । त्यसैले यो सम्भवतः असत्य हो किनभने कुनै देश, संस्था वा व्यक्तिले आफ्नै उच्चतम हितकाविरुद्ध किन पो काम गर्ला र ? त्यसैले म यहाँ हाम्रो प्रतिबद्धताप्रति पूर्णरूपेणः प्रतिबद्ध छु । नेपाल र नेपाली यसैका हकदार हुन् भन्ने म ठान्छु ।
प्रकाशित : वैशाख ३, २०७६ ०८:११